Filaharana anaty bileta tokana : Anio ny antsapaka -
AccueilRaharaham-pirenenaFilaharana anaty bileta tokana : Anio ny antsapaka
25/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ho fantatra amin’ity andro ity aorian’ ny antsapaka tontosaina etsy amin’ny biraon’ny CENI Nanisana, ny laharan’ireo kandidà anaty bileta tokana. Hiara- hiasa amin’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, handray anjara amin’ny fanomanana fifidianana ihany koa ny solontenan’ireo kandidà.
Tanterahina androany etsy amin’ny foiben’ny CENI etsy Alarobia ny antsapaka amin’ny laharan’ireo kandidà anatin’ ny efa-joron’ny bileta tokana. Ny faha- 22 ny volana aogositra teo, dia efa voarain’ny vaomiera mikarakara ny fifidianana ny lisitra ofisialin’ireo kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Feno ny fepetra rehetra hanaovana ny antsapaka hoy ny filoha lefitry ny CENI. Manao antso avo amin’ny solontenan’ireo kandidà noho izany ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, ho tonga hanatrika ny antsapaka ny sabotsy ho avy izao. “ Manomboka izao dia hiara-hiasa feno amin’ ny solontenan’ny kandida ny CENI, amin’ ireo zotram-pifidianana” hoy hatrany ny fanazavana. Ireo solontenan’ny kandida ireo izay hanatevina ny birao tsy maharitra, ary hiaraka handinika ny fikarakarana ny fifidianana.
Isan’ny noresahin’ny CENI ihany koa ny mikasika ny biraom-pifidianana izay mahatratra 24 853, taorian’ny fitsinjarana ho 700 isaka ny birao fandatsaham-bato. Noho io fitsinjarana io dia nahitana fiakarany izany, raha oharina tamin’ny taon-dasa izay 20 001. Raha ny kajikajy natao izany dia miisa 4 852 ny isan’ny biraom-pifidianana vaovao, amin’ity fifidianana 2018 ity. Ny faha-31 ny volana aogositra dia efa hipetaka isaka ny efitranon’ny biraom-pifidianana ny lisitr’ireo mpifidy. Izany hoe mitovy amin’ ireny mpanala fanadinana ireny, ka afaka jerena mialoha ny toerana hanatanterahana ny fandatsaham-bato. Ho voamarina rahateo ny mpifidy iray, na anaty lisitra na tsia. Amin’ izao fotoana dia fantatra fa efa manonta ny lisi-pifidianana hapetraka eny amin’ny rantsa-mangaikan’ny CENI eraka ny distrika sy eny amin’ ny fokontany izy ireo, izany dia ahafahan’ireo mpifidy manamarina ny anarany anatin’ny lisi-pifidianana. Atonta manomboka ny faha- 3 ny volana septambra kosa ny lisi-pifidianana hapetraka anatin’ny biraom-pifidianana, io indray dia ampiasaina hanamarinana ny mpifidy iray tonga mandatsa-bato, amin’ny alalan’ny sonia na ny lavotondro.